Spotify irikutadzisa mashandisirwo emabasa asingabvumirwe | IPhone nhau
Nacho Aragonés | | IPhone maapplication
Vashandisi vangangoita mamirioni makumi masere nemasere veSpotify vanoshandisa iyo Mahara account, uye yeavo, zvinoita sekunge Rimwe boka rinoshandisa shanduro dzakashandurwa dzeSpotify dzinovatendera kupfuura miganho yeiri remahara sevhisi
Rangarira izvozvo iyo Spotify Mahara account ine kushambadzira, ine yakaganhurirwa nhamba yenguva dzatinogona kuenda kuburikidza nerwiyo, haina nzira offline NO uye haina mhando yemhando yepamusoro zvakare.
Asi nekufamba kwenguva, zvikumbiro zvakabuda izvo zvinobvumidza kukunda kumwe kugumira. Aya maapplication akagadziridzwa, asingazivikanwe nevashandisi vazhinji, anoita kunge akapedzisira akwezva kutarisa kweSpotify, iyo yakafunga kutora danho panyaya iyi.
Parizvino, ivo vashandisi veaya maapp vari kugamuchira maemail ane inotevera meseji:
“Taona chiitiko chisina kujairika muapp yauri kushandisa tikachiremadza. Usatombo kunetseka, yako Spotify account yakachengeteka.
Kuti uwane yako account yeSpotify, ingo bvisa chero zvisingabvumirwe kana kushandurwa Spotify maapplication uye kurodha pasi uye nekuisa iyo yepamutemo Spotify app kubva kuGoogle Play Chitoro. Kana iwe uchida rumwe rubatsiro, ndapota shanya chinyorwa chedu chekuti ungadzoreredza sei Spotify.
Kana tikaona kudzokororwa kwemaapps aya asingabvumirwe kutyora mazwi edu, tinochengetedza kodzero dzose, kusanganisira kumisa kana kudzima account yako.
Thanks nekuve mushandisi weSpotify.
Hazvisati zvazivikanwa kuti ndeapi mamiriro kana izvo maapplication anofanirwa kushandiswa kugamuchira ichi chiziviso, asi zviri pachena kuti Spotify iri kuseri kwemhando idzi dzeapp.
Spotify ndeimwe yemashoma ekushambadzira mimhanzi masevhisi ayo anoenderera nekuchengetedza zvachose yemhando yebasa, kusiyana neApple Music kana Amazon Music Unlimited, uye zvingave zvinonyadzisa kana akashandurwa maapplication akaita kuti sevhisi iyi inyangarike.
Maonero aSpotify anoita seakaenzana nezvakaitika, nekuti, parizvino, zvinoita sekudaro inogumira kuraira vashandisi kuti ivo vanofanirwa kuisa yepamutemo app kubva Spotify.
Izvo zviziviso zvakafanana neizvo isu zvatakatambira (ini pachangu zvaisanganisira) pavakatanga Spotify Mhuri uye vakatiyeuchidza kuti nhengo dzaifanira kugara mumusha mumwe chete. Panguva iyoyo ivo vaingozvikwanisa kuvhara account kusvika, mune yangu kesi, ini ndaisa chaiyo kero mune yega yega maakaunzi eangu Spotify Mhuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Spotify irikutadzisa mashandisiro emaapplication asina kubvumidzwa
Apple inoratidzazve Sony mukuru weiyo yekushambadzira vhidhiyo chikuva